people Nepal » प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण नजिकिँदै गर्दा चीनले खोल्यो साझेदारीको यस्तो रहस्य ! प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण नजिकिँदै गर्दा चीनले खोल्यो साझेदारीको यस्तो रहस्य ! – people Nepal
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको मिती नजिकिँदै छ । उनी असार पाँच गते चीन भ्रमणका लागि जाँदै छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले असार ५ देखि चीनको ६ दिने औपचारिक भ्रमण गर्ने भएका हुन् ।